Buckles L-Type Manufacturers na Suppliers | China buckles L-Type Factory
Igwe anaghị agba nchara clip L-ụdị, eji na ọtụtụ ụdị nke Jera si gbalaga, n'ihi na attaching efefe akara oyiyi akwa na okporo osisi ya. Obi njikọ na ezi n'ibu ike na-enweta site pụrụ iche udi nke ikechi. Na-emekarị ihe ngwọta na-eji na eletriki USB oyiyi akwa, ngwa anya eriri USB na ngwa na-ewu nke n'ezinụlọ ngwa anya na netwọk, na mmiri na ụgbọ okporo ígwè eme njem, na Ngwuputa, mmanụ na gas ụlọ ọrụ, gwara bụrụ na ike akara.
L-ụdị buckles nwere obere ọkpụrụkpụ karịa T-ụdị buckles, na-zubere maka ojiji na ala-erughị ala ike njikọ na njikọ.
Buckles L-ụdị na-na-eri oru oma na pụtara àgwà site ahịa anyị.
Jera 'anaghị agba nchara buckles dị iche iche nha aka gị strapping mkpa nke ichebe na ibu:
Company 'logo na igwe anaghị agba nchara ikechi ụdị nwere ike akara na ikechi onwe ya.
All ndị strapping ngwa gabiga ọrụ ahụmahụ ule na okpomọkụ sitere na site -50 ° C ruo +60 ° C merela agadi ule, corrosion eguzogide ule, IP ule wdg
Mmadụ Bịa ka kpọtụrụ anyị ka nwere ihe nkọwa.
Jera buckles dị iche iche ma ọ bụ ọnụ na nzukọ na igwe anaghị agba nchara gbalaga, eriri banding ngwá ọrụ.
Igwe anaghị agba nchara nkechi HC-20-LC